पत्रपत्रिकाबाट :: Nepal Post Dainik पत्रपत्रिकाबाट | Nepal Post Dainik
काठमाडौं २१ जेष्ठ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आज भेटवार्ता गरेका छन्। ललितपुरको खुमल्टारस्थित दाहालनिवासमा भएको भेटवार्तामा उनले अध्यक्ष थप यता
काठमाडाैं, २ जेठ । राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी एकिकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केन्द्रमा ११ संरचना राख्ने व्यवस्था गरेको छ । शीर्ष नेताको व्यवस्थापनका लागि धेरै संरचनाको व्यवस्था गरिएको एक नेताले थप यता
काठमाडौं १४ बैशाख।महिना दिनअघि बजारमा हाहाकार भएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अहिले माग घटेको छ । महिना दिनअघि बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको माग अत्यधिक बढेपछि एउटा सिलिन्डर भर्न उपभोक्तालाई घन्टौं लाइन थप यता
जाजरकोट २२ पुस । जुनिचाँदे गाउँपालिका–८ की सुमित्रा खड्कालाई छाउगोठ भत्काउने खबर सुन्दा असाध्यै खुशी लागेको छ । सामाजिक कुरीतिका रुपमा रहेको छाउगोठ बस्ने प्रचलन खड्काले आमाबाट सिकेकी थिइन् । पुस्ता हस्तान्तरण जस्तै गरी थप यता
अनुसन्धानले भन्छ– जेठो सन्तान जस्तो बौद्धिक अरु हुँदैनन् !
के तपाईं घरको जेठो सन्तान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईं लागि खुसीको खबर छ । केही समय अघि मात्र गरिएको अध्ययन अनुसार, कुनैपनि परिवारको जेठो सन्तान हुनुका फाइदा धेरै छन् । जर्मनस्थित लिपजिग युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले थप यता
‘एक पिता सयौं शिक्षक भन्दा ठूलो गुरु हुन् ।’ हरेक व्यक्तिको सफलतामा आफ्नो बाबुको हात अवश्य हुन्छ । काम विशेषले टाढा रहनुपरेको नै किन नहोस्, सानो भन्दा सानो निर्णय लिनु पर्दा पनि उनको सल्लाह लिने गर्छौं । अभिभावकीय थप यता
मन्त्रिमन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा ओली–दाहालको कुरासहमति जुट्न सकेन
काठमाडाैं, ३ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि थप यता
मिडिया नेपाल’को १ नम्बर प्रदेश कमिटी गठन
इटहरी । विजयकुमार राउतको अध्यक्षतामा 'मिडिया नेपाल'को १ नम्बर प्रदेश कमिटी गठन भएको छ । मंगलबार सुनसरीको इटहरीमा राउतको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमितिको घोषणा गरीएको हो । जसको उपाध्यक्षमा मोरङका मधुसुदन ज्ञवाली, सचिवमा थप यता
नेकपा बलात्कारीहरुको पार्टी हो -अध्यक्ष रन्जित गुरुङ
जनमुक्तिसेना पार्टीका अध्यक्ष रन्जित गुरुङले नेकपालाई बलात्कारीहरुको पार्टी भनेका छन् । उनले फेसबुक स्टाटसमा ´ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बलात्कारीहरुको पार्टी हो, जनमुक्तिसेना पार्टी जनताको पार्टी हो ` लेखेका छन् । उनले थप यता
बिविन्न प्रजातीका विरुवा रोपि सलहेस क्षेत्रमा ‘हरित सडक’
लहान,साउन २ गते । लहान १२ र २२ मा रहेको सलहेस फुलबारी सौन्दर्यकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश २ का उद्योग तथा प्रर्यटन मन्त्रालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन लहान सिरहाको सहयोगमा नमूना हरित सडक निर्माण भएको छ । असारे बजेटमा थप यता